व्यक्तिगतरुपमा सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने जबरा सम्मानित ! बढी आयकर तिर्ने सूर्य नेपाल - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
व्यक्तिगतरुपमा सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने जबरा सम्मानित ! बढी आयकर तिर्ने सूर्य नेपाल
Posted by Anup Subedi | १ मंसिर २०७३, बुधबार ११:१७ |
१ मंसिर,काठमाडौ । सरकारले पाँचौं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा उत्कृष्ट करदाताहरुलाई सम्मान गरेको छ । व्यक्तिगतरुपमा सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने सिद्धार्थ शम्शेर जबरा सम्मानित भएका छन् । उनी सिप्रदी ट्रेडिङका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । आन्तरिक राजस्व विभागले आज राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उत्कृष्ट करदाताहरुलाई समान गरे । बढी आयकर तिर्ने सूर्य नेपाल ,जसमा सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनी सूर्य नेपाल प्रालि भएको छ ।
सबैभन्दा बढी कर तिर्ने निर्यातकर्ता डाबर नेपाल र सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनीको रुपमा युनिलिभर प्रालि समानित भएका छन् ।
त्यस्तै कृषि तथा पशुपंक्षीतर्फ सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनीको रुपमा ओम फिड इन्ट्रष्ट्रिज पनि उत्कृष्ट करदाताबाट समानित भएको छ ।
यसैगरी सहकारीतर्फ राष्ट्रिय सहकारी बैंक, लघुवित्त तर्फ छिमेक लघुवित्त विकास बैंक सम्मानित भएको छ । छिमेक लघुवित्त बैंकको तर्फबाट सिइयो रामचन्द्र जोशीले सम्मानपत्र प्राप्त गरेका छन । र बैंकतर्फ नबिल बैंक पनि उत्कृष्ट करदाताको रुपमा सम्मानित भएका छन् ।
यसैगरी वीमातर्फ लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेशन, रेमिटेन्स तर्फ आइएमइ र पर्यटन तर्फ तारागाउँ होटल लिमिडेट समानित भएका छन् । सेवातर्फ सबैभन्दा बढी कर तिर्ने नेपाल टेलिकम पनि सम्मानित भएको छ ।
त्यस्तै व्यापारतर्फ सिप्रदी ट्रेडिङ पनि उत्कृष्ट करदाताबाट समानित भएको छ । ५ करोडसम्मका साना करदातामा साङ्ग्रिला इनर्जी लिमिटेड र ५ करोडदेखि ४० करोडसम्म मझौला करदाताको रुपमा शिवेक हस्पिटल समानित भएका छन् ।
Previousगैरआवासीय नेपाली संघको आगामी कार्यकालका लागि भट्ट उठ्ने
Nextहल्लाको पछि नलाग्न प्रहरीलाई आइजीपीको आग्रह
जिम्मेवारी प्रति घोत्लिएर काम गर्न सासंदहरुलाई महराको निर्देशन
२३ जेष्ठ २०७५, बुधबार १३:१०
नयाँ वर्षको पार्टीमा गोली चल्दा इस्तानबुलमा ३५ को मृत्यु
१७ पुष २०७३, आईतवार ११:४५
अमेरिकामा ‘महको म’
१४ कार्तिक २०७४, मंगलवार ०९:२३
सरकारी स्वास्थ्यकर्मीको समयतालिका परिवर्तन, अब ओभरटाइभ भत्तापनि
८ माघ २०७३, शनिबार ०८:०१